चंचलता र निष्ठा, विश्वव्यापी चर्च अफ भगवान स्विजरल्याण्ड (WKG)
मसँग चीजहरू चाँडै सम्पन्न गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ। यो कुनै मानवीय प्रवृत्ति जस्तो देखिन्छ कि कुनै चीजको लागि उत्साहित हुन, उत्साहपूर्वक यसलाई अनुसरण गर्न, र त्यसपछि यसलाई फेरि बाहिर चल्काउन। यो मेरो जिम्नास्टिक कार्यक्रमहरूमा हुन्छ। मैले वर्षौंदेखि विभिन्न जिम्नास्टिक कार्यक्रमहरू सुरु गरें। म दौडे र कलेजमा टेनिस खेले। केही समयको लागि म एक फिटनेस क्लबमा सामेल भएँ र नियमित रूपमा अभ्यास गर्‍यो। पछि मैले व्यायाम भिडियोको निर्देशनमा मेरो बैठक कोठामा प्रशिक्षण लिएँ। म केहि बर्षको लागि हिंड्न गए (हिड्दै) अब म फेरि भिडियोको साथ प्रशिक्षण गर्दैछु र म अझै यात्रा गर्दैछु। कहिलेकाँही म हरेक दिन तालिम दिन्छु, त्यसपछि केहि हप्ताको लागि विभिन्न कारणले छोडिदिन्छु, त्यसपछि म फर्कन्छु र फेरि सुरु गर्नुपर्दछ।
कहिलेकाँही म आत्मिक रूपमा हतारमा पनि छु। कहिलेकाँही म मेरो डायरीमा हरेक दिन ध्यान गर्दछु र लेख्छु, त्यसपछि म तयार कोर्समा जान्छु र डायरी बिर्सन्छु। मेरो जीवनको अन्य समयमा मैले भर्खर बाइबल पढें र अध्ययन गर्न छोडिदिए। मैले प्रार्थना पुस्तकहरू लिएँ र त्यसपछि अन्य पुस्तकहरूको लागि आदानप्रदान गरे। कहिलेकाँही मैले प्रार्थना गर्न छोडिदिएँ र केहि समयको लागि बाइबल खोलेँ।
मैले यसको लागि आफैंलाई हिर्काएँ किनकि मलाई लाग्छ कि यो चरित्रको कमजोरी हो - र हुनसक्छ त्यो केस हो। भगवान्‌ जान्नुहुन्छ कि म अस्थिर र चंचल छु, तर उसले मलाई अझै माया गर्छ।
धेरै वर्ष अघि उसले मलाई मेरो जीवनको दिशा सेट गर्न मद्दत गर्‍यो। उसले मलाई उसको नाममा बोलायो उसको एक जना छोरा हुन, उहाँलाई चिन्न र उनको प्रेमलाई जान्न र उसको छोरोबाट छुटाउन। र मेरो बफादारीमा पनि उतारचढाव आउँछ भने पनि म सधैं उही दिशामा सर्दछु - परमेश्वरतर्फ।
ए डब्ल्यू टोजरले यसो भन्यो: म यो एउटा बाध्यतामा जोड दिनेछु, यो ठूलो इच्छाशक्तिले, जसले येशूलाई सधैंभरि हेर्नको लागि हृदयको अभिप्राय सिर्जना गर्दछ। भगवानले यस उद्देश्यलाई हाम्रो छनौटको रूपमा स्वीकार्नुहुन्छ र यस संसारमा हामीलाई असर गर्ने धेरै अलमल्याउने कुराहरूलाई ध्यानमा राख्नुहुन्छ। उहाँलाई थाहा छ कि हामीले हाम्रो हृदयको दिशा येशूमा जोडिसकेका छौं, र हामी पनि यो जान्न सक्छौं र आफूलाई यो ज्ञानबाट सान्त्वना दिन सक्छौं कि आत्माको एउटा बानीले एक निश्चित समय पछि एक प्रकारको आध्यात्मिक पल्टन हुन्छ जुन सचेत हुँदैन। हाम्रो पक्षमा प्रयासलाई थप आवश्यक छ (ईश्वरको खोजी, पृ। 82२)।
के यो महान कुरा होइन कि भगवानले मानव हृदयको अस्थिरतालाई राम्ररी बुझ्नुहुन्छ? र यो हामीलाई थाहा छैन कि उहाँ हामीलाई सहि दिशामा रहन सहायता गर्नुहुन्छ, सधैं आफ्नो अनुहारमा केन्द्रित? तोजरले भनेझैं यदि हाम्रो मुटु येशूमा केन्द्रित भएको छ भने हामी आत्माको बानी बसाल्नेछौं जसले हामीलाई सीधै ईश्वरको अनन्तसम्म पुर्‍याउँछ।
भगवान चंचल हुनुहुन्न भन्नेमा हामी धन्यवादी हुन सक्छौं। उहाँ हिजो, आज र भोलि नै हुनुहुन्छ। ऊ हामी जस्तो छैन - ऊ कहिले पनि हतारमा चीजहरू गर्दैन, शुरू र बन्दको साथ। ऊ सँधै विश्वासी रहन्छ र बेवफाईको बेलामा पनि हामीसँगै बस्छ।